चीनसँगको व्यापार सहजीकरणका लागि चीनका नवनियुक्त राजदूत श्रेष्ठलाई चेम्बरको आग्रह
थाई स्माइलको काठमाण्डौ–बैंकक उडान सुरु
काठमाण्डौ । डिजिटल बैंकिङमा अग्रणी स्थानमा रही नवीनतम प्रविधिद्वारा बैंकिङ सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको एनआईसी एशिया बैंकले डिजिटल बैंकिङको प्रबद्र्धन गर्नका लागि आफ्नो मोबाइल बैंकिङ (एनआईसी एशिया मोबैंक) एप,...
काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीले चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग आज भेटवार्ता गरेको छ। श्रेष्ठसँग भएको भेटबार्ताका क्रममा नेपाल चीन व्यापार सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको नेपाल...
काठमाण्डौ । ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडर शाओमीले रेडमी नोट ११ प्रो नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ। रेडमी नोट ११ प्रो मा किफायती मूल्यमा उत्कृष्ट क्यामेरा र छिटो चार्ज हुने ब्याट्री रहेको कम्पनिले घोषणा गरेको छ। स्मार्टफोनको...
काठमाण्डौ । सम्पूर्ण वायुसेवासहित सञ्चालनमा रहेको क्षेत्रीय वायुसेवा कम्पनी थाई स्माइल एयरवेजले काठमाण्डौदेखि बैंककसम्मको हवाई उडान सेवा सुचारु गरेको छ। असार १७ देखि काठमाण्डौ–बैंकक दुईतर्फी हवाई सेवा प्रारम्भ भएको...
काठमाण्डौ । हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओ निष्कासनको शुक्रबार दिउँसोसम्म ६ गुणा बढीले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको छ। यो कम्पनीले गत असार १५ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले १०० अंकित दरका...
काठमाण्डौ । नेपाली युवा राहुल श्रेष्ठ मध्यपूर्व क्षेत्रमा ३० वर्षमुनिका शीर्ष ३० शेफमा छनोट भएका छन्। क्याटरर मिडल इस्टले प्रत्येक वर्ष छनोट गर्ने त्यस क्षेत्रका सबैभन्दा प्रतिभाशाली र कडा परिश्रम गर्ने एफ एन्ड बी...
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ज्यापु समाज यलबीच बीमा जागरण र शिक्षा सञ्चालन गर्ने समझदारी बनेको छ। समझदारीपत्रमा अजोडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्री र ज्यापु समाज यलका अध्यक्ष तीर्थलाल महर्जनले...
ब्रिटिस कलेजमा ‘इन्टरनेट अफ थिंग्स’ ल्याब सञ्चालन
काठमाण्डौ । ब्रिटिस एक्रिडेसन काउन्सिल (बीएसी)को मान्यता प्राप्त नेपालको एक मात्र शैक्षिक संस्था द ब्रिटिस कलेज (टीबीसी)ले ‘इन्टरनेट अफ थिंग्स’ ल्याब स्थापना गरेको छ। शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी कलेजका...
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले आज शुक्रबारबाट तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ११ नेपालटारमा बैंक शाखा स्थापना गरी बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ। उक्त शाखाको उद्घाटन ब्रान्ड प्रवर्द्धक वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र...
काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/८० को मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साताभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ। आज शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा बैंकनोट सेर्डिङ एन्ड ब्रिकेटिङ सिस्टमको...
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंकले बागमती प्रदेशको धादिङस्थित सिम्लेमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकले आज शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी नयाँ शाखाको उद्घाटन गरेको हो। १६५ औँ उक्त शाखा कार्यालयको नेपाल...
बैंक अफ काठमाण्डूका ग्राहकलाई युरोपा फिटनेस सेन्टरमा २५%को छुट
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड र युरोपा फिटनेस सेन्टरबीच बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा बैंकको ग्राहकलाई २५% छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। ...
नेप्सेको चार्टमा बन्यो ‘बुलिस इन्गल्फिङ’, आगामी साता के होला ?
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । लगातार गिरावटपछि सेयर बजारले अघिल्लो साताको शुक्रबारदेखि करिब १८०८ को विन्दुबाट उकालो यात्रा तय गरेको छ। योसँगै बजारमा न्यून विन्दुबाट करिब २०० अंकको बढोत्तरी आएको छ। अब बजारले विस्तारै...
इन्धनमा भारतले लगायो निर्यात कर, नेपालमा फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्छ ?
काठमाण्डौ । भारत सरकारले पेट्रोल, डिजेल र जेट इन्धन (एटीएफ) मा निर्यात कर लगाउने निर्णय गरेको छ। पेट्रोल र एटीएफ निकासीमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ कर लगाउने भारत सरकारले निर्णय गरेको हो। यसको...
विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिमाण घटाउने सरकारको निर्णय, अब कुन पदकमा कति ?
काठमणडौ । सरकारले विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिमाण घटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिमाण घटनाउने निर्णय गरेको हो। हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनेहरुलाई...
मञ्जुश्री फाइनान्सको शाखा हेटौँडामा
काठमाण्डौ । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ स्कुलरोडमा आफ्नो २६ औँ शाखा उद्घाटन गरेको छ। मञ्जुश्री फाइनान्सकी अध्यक्ष इन्दिरा पण्डित घिमिरेले एक समारोहका बीच उक्त शाखा...
सेञ्चुरी बैंकका ग्राहकलाई भैरहवाको सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालमा छुट
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड भैरहवा शाखा र सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालबीच कर्मचारी तथा ग्राहकको उपचार सेवा विषयमा सम्झौता भएको छ। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालबीच विभिन्न सेवा�...
सहज च्यालेन्ज फन्डद्वारा राउन्ड–१ का विजेता घोषणा, राउन्ड–२ का लागि आवेदन खुला
काठमाण्डौ । सहज भनेर चिनिने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (एनएएमडीपी) दोस्रो चरणद्वारा जुन २८ मा एक सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहज च्यालेन्ज फन्ड राउन्ड १ का विजेताहरुको घोषणा गरिएको छ। कुल १८८ आवेदनमध्ये ५ नवीनतम...
नेप्सेमा सामान्य करेक्सन, ‘बजारको आगामी दिशा मौद्रिक नीतिले तय गर्नेछ’
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सेयर बजार सामान्य करेक्सन आएको छ। बजार आज ८.८७ अंकले ओरालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक २०२८.७७ को विन्दुमा ओर्लेको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक...
नेप्सेमा थपियो साढे ४२ लाख कित्ता बढी सेयर
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) साढे ४२ लाख कित्ता सेयर थपिएको छ। नेप्सेमा आज जीवन विकास लघुवित्तको बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो। यो लघुवित्तको कुल ४२ लाख ५८ हजार ८०० कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। जीवन विकास...
राजधानीकै एउटा बस्ती तीन दिनदेखि अन्धकारमा, एउटै पसलले फाल्यो ५० किलो मासु
काठमाण्डौ । विद्युत आपूर्ति ठप्प हुँदा विगत तीन दिनदेखि काठमाण्डौकै एउटा बस्ती अन्धकारमा छ भन्दा सायद अचम्म लाग्न सक्छ। तर, यो वास्तविकता हो। काठमाण्डौको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–४ पासीकोटमा बत्ती नबलेको ७२ घन्टा भइसकेको...
बैंक खाता खोल्दै हुनुुहुुन्छ ? माछापुच्छ्रे बैंकमा छन् सुुविधै–सुुविधा
– रेखा चन्द काठमाण्डौ । ग्राहकलाई मध्यनजर गर्दै बैंकहरुले विभिन्न किसिमका बचत खाता योजना ल्याउने गर्दछन्। पछिल्लो समय त झन निक्षेप तान्नकै लागि भए पनि बैंकहरुले डबल निक्षेप योजना धमाधम ल्याइरहेको अवस्था छ। बैंकहरुले...
सेबोनलाई एक आमलगानीकर्ताको खुलापत्रः ‘एओएन हटाउने नै हो भने अड लट अर्डर नि हटाउनुहोस्’
काठमाण्डौ । धितोपत्र बजारमा धेरै सुधार गर्ने ठाउँहरु बाँकी नै रहेको भन्दै काभ्रेबाट एक लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई खुलापत्र लेखेका छन्। काभ्रेका आमलगानीकर्ता राजकुमार न्पौपानेले पाँचबुँदे सुझावसहित...
‘आइसिटी अवार्ड २०२२’ को ११ विधामा नोमिनेसनका लागि अनलाइन आवेदन खुला
काठमाण्डौ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा परिचित आइसिटी अवार्डको सातौं संस्करणको अनलाइन नोमिनेसन (आवेदन) आज जुलाई १ देखि खुला भएको छ। लिभिङ विथ आइसिटीको आयोजना र विभिन्न राष्ट्रिय तथा...
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउ ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले घटेको छ। योसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६...
काठमाण्डौ । नबिल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले आज असार १७ गते शुक्रबारदेखि आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। नबिल बैंककोे असार १६ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले...
काठमाण्डौ । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेको भकुण्डेबेसी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाई सहयोगस्वरुप ११ थान कुर्सी र १ थान टेबुल हस्तान्तरण गरेको छ। काभ्रेको...
काठमाण्डौ । रिडी र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी आज (असार १७ गते) एकैदिन विशेष साधारणसभा डोकेका छन्। दुवै कम्पनीको सभा आआफ्नो कर्पोरेट कार्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट सभा गर्नेछन्। रिडीको दिउँसो १ः३० बजेबाट र रैराङको...
काठमाण्डौ । नेपाल फाइनान्सको अवितरित सवा १४ लाख कित्ता बढी सेयर आज असार १७ गतेबाट बिक्रीमा राखिएको छ। कम्पनीले गत जेठ ६ गतेदेखि जेठ २६ गतेसम्म आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि बिक्री खुला गरेको हकप्रदमा बिक्री हुन बाँकी रहेको कुल...
काठमाण्डौ। काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले वितरण गर्ने खानेपानीमा झाडापखाला तथा हैजाजन्य जीवाणु भेटिएको छ। उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्दै आएको केयूकेएलको खानेपानीमा हैजा र झाडापखालाको जीवाणु भेटिएको...